Thursday May, 19 2022 - 01:07:49
Wednesday February 19, 2014 - 18:02:33 in by London Office
Gabadh kasta waxay xaq u leedahay inay doorato ninka ay doonto.Waana shay cadaalada ka fog in lagu khasbo cid aanay rabin. Gabdhuhu ama habluhu waxay soo maraan heerar kale duwan, marka laga eego xagga da'da. Inta u dhexayso 15 jir ilaa 20 jirka
Gabadh kasta waxay xaq u leedahay inay doorato ninka ay doonto.Waana shay cadaalada ka fog in lagu khasbo cid aanay rabin. Gabdhuhu ama habluhu waxay soo maraan heerar kale duwan, marka laga eego xagga da'da. Inta u dhexayso 15 jir ilaa 20 jirka, habluhu intooda badan raggu waa isugu mid. Waana xilliga ay gabadha ku adag tahay habka xulashadu.
Waxayna u baahan tahay in si joogta ah tallooyin la siiyo. Si ayna ugu dhicin booraan. Laakiin marka la gaadho 20 iyo wixii ka weyn waxay figrad buuxda ka haystaa habka ay u xulan lahayd ninkii ay nolasheeda ku aamini lahayd.Gabadhu waa inay ka feejignaataa khiyaamooyinka ay kula kacaan ragga qarkii. Iyagoo isticmaalaya erayo – ma hadalo macaan oo aan dhaafsanayn afka baarkiisa. Waa inay iska shaandhayso, balanqaadyada ay soo qadimaan raggu, iyagoo doonaya inay fushadaan ujeedooyin qarsoon.Waa inay noqotaa gabadh fiiro badan oo aan si fudfud loo duufsan Karin.
Bal aan soo qaadano qaar ka mid ah hadalada macaan ee soo jiita dumarka.
= waxaad ku arkaysaa shaki badanm oo ay kaaga shakiyayso inay gabadh kale kaa qaado. Laakiin shakigaasi maaha kii xumaanta ahaa, ee waa jacyl xadkiisii dhaafay.
Noocyada dumarka ee raggu neceb yahay.
= gabadha carrabka dheer, ee meelkasta hadal iyo doodd la taagan.
= gabadha ninkeeda meel kasta ku cidhiidhada, ee ka garab hadasha. Marna aan tixgalin hadalkiisa.
= gabadha doonta inay ninkeeda ka sarrayso ama u taliso. Wax kastuu soo jeediyo ku gacansaydha.
= gabadha ninka reerkiisa iyo saaxiibadii ka caydhisa gurigeeda.
= gabadha markasta ninkeeda ka codsata lacag dheeraad ah, oo ka baxsan tan gurigeed ku filan. Waxyaabaha dumarka lagaga farxiyo.
= in la amaano.
=in loo keeno hadyado kala duwan.
= in goor kasta loo muujiyo in la jecel yahay.
= in markay hadlayso, loo dhago nuglaado.
= in la caawiyo markay hawl hayso.
= in laga ilaaliyo hadalada qallafsan.
= in loo muujiyo ixtiraam badan.
= in loo garaabo sax ama khalad
=in loo sameeyo wax wada iibsi (shopping)
Noocyada dumarka ee raggu jecel yahay.
= gabadha furfuran, ee inta badan aan qaylo iyo hadalo xun ragga ku odhan.
=gabadha mar kasta is qurxisa. Gurigeedana qurxisa.
=gabadha tallada ninkeeda uga dambaysa.
=gabadha ninkeeda aaminta, wuxuu u sheego maqasha.
=gabadha dhawrta ninka ehelkiisa iyo saaxiibadii.
Afka Shacabka , Holland
Daawo: Xukuumadda oo sheegtay in Dawladda hoose ku filantay Suuqa waaheen
19/04/2022 - 22:18:11
Daawo: Xoghayaha Dawlada hoose oo Digniin culus u dirtay ganacsatada Dooxa deggen
18/04/2022 - 08:43:05
Daawo: Maxay ahayd dhacdadii uu la kulmay Ganacsade Bookh oo shalay Gebiley ku qaybinayey lacag
12/04/2022 - 21:42:55
Daawo: Dawladda Hoose oo Farriimo Dirtay Bulshada Caasimadda, Xilli maalinti 2aad la nadiifinayo suuqa waahen
12/04/2022 - 17:18:37
Daawo: Maxay Reer Berbera ka yidhaahdeen Dhawaaqa cashuurta 10% ee lagu haysto
10/04/2022 - 20:51:19
Daawo: Jaaliyadaha JSL ee SWEDEN oo kulan Afur ah isugu yimi+Maxay ka wada hadleen?
09/04/2022 - 22:11:31
Daawo: Ururka Dawladaha hoose oo Guddomiyahooda ahna maayarka caasimada ka kaalmeyey masiibadii suuqa waaheen
07/04/2022 - 21:19:21
Daawo: Maxay Tahay Arrinta ay Sida weyn uga qayliyeen Muslimiinta Maraykanku?
27/03/2022 - 18:02:54
Daawo: Dawladda Hoose Berbera oo Waddo kale oo Casriya Saaka Dhagax dhigtay
27/03/2022 - 17:52:47
Daawo: Maxay Tahay Eedaha loo haysto Raila Odinga iyo William Rutu?
24/03/2022 - 17:14:20